Archive du 20200227
Marc Ravalomanana “Vetivety dia mety hitsimbadika io rasa io”
Raha nanontaniana momba ny hoe tsy leo resy ve ny TIM i Marc Ravalomanana omaly, dia naneho fa tsy resy izany izy ireo fa noresena, ary tsy leo izany. Toy ny baolina kitra io,
Fametrahana fitsinjaram-pahefana tena izy 7 taona farafahakeliny no ilaina
Tsy maintsy miainga amin’ny resaka zo hatrany isika rehefa miresaka fitsinjaram-pahefana,
Antoko TIM Efa miomana ny amin’ny 2023…
Mandeha tsikelikely ny fanomezana aina vao ny antoko ary misy zavatra tsy maintsy hovaina.
Andrim-panjakana Mbola azo sorohana tsara ny krizy
Tsy zakan-dRakotovao Rivo sy ny HVM ny fanambarana nataon’ny filoham-pirenena ny 28 aprily 2019 tetsy Mahamasina nilazan’ny filoha hoe : fahazavana sa Antenimierandoholona ?
Edito Nitsimbadika ambony ambany
Ory hava-manana sy faly havana ory, hono, isika malagasy amin’izao ankehitriny izao raha toa ka tia fihavanana sy mahay miara-miory teo aloha.
Fanabeazam-pirenena Hohatsaraina ny fampianarana manoratra teny Malagasy
Faritra miisa 11 manerana an’i Madagasikara no misitraka ny tetikasa ho fampisakafoanana ireo ankizy mpianatra eny an-tsekoly amin’ny
Atleta nikoizana lasa sahirana Tafiditra an-tsekoly ihany i Paquerette
Noraisin’ny governoran’Itasy tanteraka ny fampidirana an-tsekoly an’i Paquerette ilay zazavavy kely zanaky ny sahirana lasa atlela nikoizana tany amin’iny faritra iny.
Bakalorea 2020 Hotanterahina ny 17 ka hatramin'ny 21 aogositra ho avy izao
Hotanterahina ny alatsinainy 17 ka hatramin'ny 21 aogositra ho avy izao manomboka amin’ny fito ora maraina ny fanadinana bakalorea ankapobeny sy ny bakalorea teknika fihodinana voalohany.
Tranga hafahafa tetsy Anosibe Lehilahy roa maty teny an-kalamanjana
Hafahafa ny toe-javatra niseho teny Anosibe omaly. Lehilahy roa samy hafa no samy maty tamin’ny fomba mampiahiahy.
Antananarivo Renivohitra Andrimasom-pokonolona 3000 mianadahy no hahetsika
Tena mihorohoro Antananarivo, tsy ampy intsony ny mpitandro filaminana irery miasa. Averina noho izany ny andrimasom-pokonolona eto Antananarivo mba hametrahana ny fandriampahalemana,
Ampefiloha Nampidirina vonjimaika eny Antanimora ilay mpanendaka tratra
Lehilahy iray no voasambotry ny polisim-pirenena avy ao amin’ny PPA Ampefiloha ny alahady teo rehefa avy nanendaka tovolahy teny amin’ny faritra La Réunion kely.